गर्भावस्थामा svetroberzoice चयन
गर्भावस्थामा, महिलाको शरीरले गम्भीर हर्मोनल र मनोवैज्ञानिक पुनर्संरचनाको सामना गरिरहेको छ। कहिलेकाँही गर्भवती महिलाहरू सामान्य राज्यको लागि अशुद्ध लक्षणहरू अवलोकन गरिन्छ र यसको बारेमा चिन्ता गर्न थालेका छन्। त्यस्ता लक्षणहरू गर्भावस्थाको बखत गुलाबी स्टालिशहरूको उपस्थिति हो। डिस्चार्ज बिभिन्न छायाहरू हुन सक्छन् - खैरो, एल्युमिनियम, गुलाबी, सेतो, रंगहीन - र उपस्थितिको लागि फरक कारण छ।
यस लेखमा हामी यो सब भन्दा साधारण प्रश्नहरू विचार गर्न प्रयास गर्नेछौं। के यो खतरनाक छ? यी लक्षणहरूको कारण के हो? तपाईले के गर्नु पर्छ?
यो खतरनाक छ?
समयपूर्व आतंक नगर्नुहोस्। गर्भावस्थाको क्रममा फिक्का गुलाबी डिस्चार्ज सधैं कुनै पनि रोगबिता को उपस्थिति को बारे मा कुरा गर्दैन। भविष्यको आमाको शरीरमा, हार्मोनल पेस्ट्रोकिका यस्तो हुन्छ, यसको परिणाम स्वरूप केही हर्मोनसलाई केही हर्मोनसको आवंटनमा वृद्धि हुन्छ। तिनीहरूले श्रोविस अंगहरूको संरचना बदल्छ, तिनीहरूलाई अधिक खोलेर क्षतिको विषय बनाउँदछन्।
विकासशील भ्रुणको उपस्थितिले पेल्विक अ organs ्गको तटरी बढाउँदछ। तसर्थ, योनी वा गर्भाशयको श्वेंड झिल्लीमा कुनै माइक्रोक्रिक्सले छनौटको र color परिवर्तन गर्न सक्दछ। डिस्चार्ज परिवर्तन, र तिनीहरूको रंगमा इरिथ्रोसाइट्स को सामग्री निर्भर गर्दै।
नियमको रूपमा, प्रकाश-हल्का-गुलाबी डिस्चार्जहरू गर्भावस्थामा कुनै खतरा छैन र बलगममा रगतको रगत देखाउनुहोस्। यो एक साधारण आंशिक प्रक्रिया हो जुन महिलाको शरीरको पुनर्संरचनाको बारेमा कुरा गर्दछ। यसैले, भ्रूणको लागि निरन्तर उपकरणको तयारी हुन्छ।
तथापि, गोप्यताको अधिक गहन दागले गर्भवती महिलाको शरीरमा गम्भीर पार्थ्यन्त्रको प्रक्रियालाई जनाउन सक्छ।
जहाँ छनौट अधिक प्रशस्त, गहन, गहन र र color ्ग एक गाढा छाया प्राप्त गर्दछ, यो तुरुन्त स्त्री रोग विशेषज्ञ मा जान आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा, जोखिम छिटो बढ्छ।
या त यसले महिलाको शरीरमा उत्पन्न भएको गम्भीर संक्रामक प्रक्रियाहरू संकेत गर्दछ। उदाहरणका लागि oncolorly प्रक्रियाहरूको विकास गर्ने जोखिम जोखिम छ।
गुलाबी हाइलाइटहरू प्रारम्भिक समयमा
<< p> जब गर्भावस्था भनेको समय हुन्छ जब मासिक धर्म आउनुपर्दछ, विशिष्ट विलोशिप देखा पर्दछ। Pink डिस्चार्ज गर्भावस्थाको सुरूमा अपर्याप्त हार्मोनको साथ सम्बन्धित छ। यो सबै गर्भवती महिलाको नवौंको बारेमा अवलोकन गरिन्छ - यस्तो लक्षणको घटनाको आवृत्तिको आवृत्तिको बारेमा।
गर्भावस्थामा, महिलाको शव गम्भीर हर्मोनल र मनोवैज्ञानिक पुनर्संरचनाको अनुभव गर्दैछ। कहिलेकाँही गर्भवती महिलाहरू सामान्य राज्यको लागि अशुद्ध लक्षणहरू अवलोकन गरिन्छ र यसको बारेमा चिन्ता गर्न थालेका छन्। त्यस्ता लक्षणहरू गर्भावस्थाको बखत गुलाबी स्टालिशहरूको उपस्थिति हो। डिस्चार्ज बिभिन्न छायाहरू हुन सक्छन् - खैरो, एल्युमिनियम, गुलाबी, सेतो, रंगहीन - र उपस्थितिको लागि फरक कारण छ।
केटीहरू, के कसैले आठौं हप्ताको गर्भावस्थाको सामना गर्न सक्दछ। म बिहान सबेरै उठें, एक अण्डाको सेतो पारदर्शी र फिक्का गुलाबी विनियोजनको एक सानो टुक्रामा बनेको छु, नभईको डाक्टर, / p ><< p> म यो सबै भन्दा पहिले लेख्छु जो पहिलेको आमाको लागि लेख्छन् जो योजनामा ​​छन् र जो योजना बनाएका छैनन् (पाठ्यक्रमहरू जसले जन्म गरेका छैनन्)।
<< p> सामान्य, अप्रिल 7, नियमित दिन, सबै चीज सहज रूपमा जान्छ। उहाँले टाउको धोउनुभयो, ओछ्यानमा पल्टिनुभयो। करीव 22. 00 मलाई म शौचालयमा दिइएको थियो, चीजहरू बनाइएको थियो र कागजमा मुश्किलले मुश्किल गुलाबी सिलहरू भेट्टाए।
त्यहाँ सेतो र गुलाबी थोप्लाहरू पनि थिएनन्, तर प्राय: गुलाबी धेरै फिक्का छ कि यदि तपाईंले याद गर्नुहुन्न भने तपाईंले याद गर्नुहुन्न।
<<< यहाँ, मभित्र मेरा आँखै छ, एम्बुलेन्सले तुरून्त जगायो (किन? किनकि यी पहिलो गर्भावस्थामा विनियोजन गरिएको थियो, जसको लागि मैले ZB लाई सचेत गरेन।
एम्बुलेन्स 10 मिनेटमा आइपुग्यो। अस्पतालमा अल्ट्रासेन्डउन्ड र एक सानो Hymatomatom (प्लेसेन्टको डिस्चामेन्ट)। उनीहरूले अस्पताललाई पक्राउ गरे र उनको दुईवटा मोटाई दिए। तिनीहरूले रगत लिए। त्यस दिनबाट हरेक दिन indels र तोकिएको औषधी देखियो।
अप्रिल 11 एक पुन: अल्ट्रासाउन्ड बनायो - सबै ठीक छ। मुटु धडकन, त्यहाँ कुनै डर छैन। ईजेक्शन रद्द गरियो, ट्याब्लेटहरू 12 हप्तासम्म पिउन भनियो। सोमबार अगाडि अस्पताल मा, तर पहिले नै घर रिलीज।
इच्छित गर्भावस्थाको सुरुवातले भविष्यको मोटलीले उनको शरीर हेर्न थाल्छ। निस्सन्देह, त्यस्ता लक्षणहरू, चक्कर आउ जस्तै हेरचाह गर्नेको अभावले, हेरचाहकर्तालाई होइन, तर केवल नौ महिनामा उनले बच्चालाई देख्नेछन्। गर्भावस्थाको बखत डिस्चार्ज आदर्श र रोग विशेषज्ञ अभिव्यक्तिको लागि दुबै विकल्प हुन सक्छ। हामी महसुस गर्ने कोशिश गर्नेछौं कि उनीहरूको मतलब जलाउने समयमा प्रकाश वा फिक्का गुलाबी डिस्चार्ज डिस्करण डिस्चार्ज।
सामान्य रूपमा, गर्भवतीको भित्तामा निषेचेको अण्डाको निशोधनको क्रममा गर्भवती भएको अन्डाको साथ देखा पर्न सक्छ।
यदि यी विमुखीकरण प्रशस्त छैन भने (पुकान्य) र 1-2 दिनहरू जारी राख्नुहोस्, तब तपाईं चिन्ता लिनु हुँदैन।
यदि गर्भवती महिलाका गुलाबी हाइलाइटहरू प्रशस्त छन्,2दिनसम्म समाप्त हुन्छ, वा सामान्य रूपमा उनीहरूले रातो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ।
गर्भावस्थाको समयमा गुलाबी शून्य औषधिहरूको दोस्रो कारण यौन kncosa पछि यौन म्यूकोसाको एक सानो चोटपटक हो जुन योनी सेन्सरको साथ अल्ट्रासाउन्ड जाँच हुन्छ। एक रोचक स्थितिमा रहेका महिलाहरूमा मुर्ख सेक्स पर्चा पूर्ण छन् र सफा परीक्षाको साथ पनि, माइक्रो-घाममा पनि, जुन गुलाबी डिस्चार्जबाट क्लिंकिक रूपमा प्रकट हुन्छ, जुन क्लिंक डिस्चार्ज द्वारा क्लिंक रूपमा प्रकट हुन्छ। तसर्थ, गर्भावस्थाको अवधिमा, योनिप्ति अनुसन्धानलाई विशेष आवश्यकता बिना नै सिफारिस गरिएको छैन।
सबैभन्दा खतरनाक कुनै पनि गर्भाशय अवधिमा खतरनाक रक्तस्रावको उपस्थिति हो। गर्भावस्थाको प्रारम्भिक अवधिमा खूनी स for ्केतको उपस्थितिले या त गर्भको गर्भावस्थाको ठूलो गर्भपतन, वा यो रोकिएको भैसकेको छ, र फलहरू बाहिर जान्छ।
गद्दा अवधिमा जननांग जनताबाट रक्तस्रावको बारेमा बताउँदै। यो लक्षण डाक्टरको तत्काल अपील को एक कारण हो, अन्यथा आमा र फलहरु रक्तस्राव बाट मर्न सक्छन्। गर्भावस्था, गर्भावस्था, गर्भावस्थाको alommetroos मा नाप्ने क्रममा ozo-खैरो डिस्चार्ज देखाउन सकिन्छ, साथै एक विकासशील echopic) गर्भावस्था।
पहेंलो-गुलाबी रंगको गर्भाविक गन्ध एक अप्रिय गन्धको साथ गर्भाशयको समयमा जनपतिले जनसंख्याको प्रसारणको बारेमा कुरा गर्न सक्दछ। यदि तपाईं मद्दतको लागि डाक्टरलाई आवेदन दिनुहुन्न भने, चयनको रंग हरियो बन्न सक्छ। यस्तो छनौट उच्च तापमान, कमजोरी, किनार, मलालिस, फोहोर र भोकोको क्षतिको साथ हुन सक्छ। यस अवस्थामा, महिलाले इन्टिब्याटिकोरियल थेरापी लिनुपर्नेछ, र रोगजन पहिचान गर्न विश्लेषण गर्न सकिन्छ, जसले यस्तो सूजनपूर्वक त्यस्तो सूजन प्रक्रिया निम्त्याउँछ।
यसैले, महिलाले आफ्नै डिस्चार्ज पछ्याउन आवश्यक छ, र विशेष गरी यदि उनले बच्चाको अपेक्षा गरे। गर्भावस्थाको बखत हल्का-गुलाबी डिस्चार्ज प्रायः आदर्शको विकल्प हो र यदि तिनीहरू छन् भने भविष्यको चिन्ता लिनु हुँदैन: प्रशस्त र लामो छैन। यदि यसले अझै पनि उनको छनौटको चरित्रको चिन्ता गर्दछ भने, प्रतिबन्ध लगाउनु र डाक्टरलाई सोध्नुहोस्, जहाँसम्म यो सामान्य छ।
<< p> सबैलाई थाहा छ कि गर्भावस्थामा महिलालाई शान्तिले सिफारिस गरिन्छ। तर कसरी शान्त हुन कत्तिको शान्त हुन? उदाहरण को लागी, तिनीहरू देखा पर्दछन्। र यदि गर्भावस्थाको बखत सेतो डिस्चार्ज भविष्यमा चकित छैन आमा एकदमै बलियो छैन, त्यसपछि गुलाबी तपाईं चिन्ता गर्नुहुन्छ। र व्यर्थमा होइन! प्राय: गर्भावस्थाको क्रममा गुलाबी डिस्चार्ज विभिन्न रोगबिवादको संकेत हो।
प्रारम्भिक समयमा गुलाबी हाइलाइटहरू किन छन्?
पाठ्यक्रम, धेरै महिलाहरू अब त्यहाँ एउटा प्रश्न थिएनन् किन त्यहाँ यस्तो विवेक थिए। सबै कुरा धेरै सरल छ: गर्भावस्थाको पहिलो हप्तामा, महिलाको हार्मोनल पृष्ठभूमि कडा परिवर्तन हुँदैछ। हार्मोनसको कार्य अन्तर्गत योनीको श्वेत झिल्ली मुश्किल मुश्किलले भइरहेको छ। उही समयमा, साना साना रक्त वाहिकाहरूको संख्या - क्यालीलाइट बढ्छ। यहाँ तिनीहरू दुबैलाई सानो क्षतिको साथ पनि रक्तस्राव गर्दैछन्।
गर्भावस्थाको क्रममा सेतो-गुलाबी डिस्चार्ज हुन सक्छ। यो गर्भधारण पछि -12-12 दिन पछि हुन्छ। प्रायजसो, भविष्यको बच्चा आठौं दिनमा गर्भाशयको भित्तामा जोडिएका छन्। यद्यपि कहिलेकाँही यो प्रक्रिया ढिलाइ गर्न सक्दछ। एक नियमको रूपमा, यो एक दिनमा पारित गर्ने गुलाबी रंगको सानो डिस्चार्जको साथ, र कहिलेकाँही केहि घण्टामा।
साथै, गर्भावस्थाको सुरूमा गुलाबी हाइलाइटहरू त्यस दिन देखा पर्न सक्ने क्यालेन्डरको आधारमा देखा पर्न सक्छ। यसको मतलब यो छ कि आमाको जीवमा प्रोसेस्टेन आवश्यक भन्दा कम उत्पन्न हुन्छ। तसर्थ, छुट्याउने पूरोद्रियमको सानो अंश सुरु हुन्छ।
सामान्यतया, मासिक धर्मको समयमा, एपेमेरोट्रियम गर्भाशयबाट पूर्ण रूपमा अवस्थित हुन्छ र रगतले बाहिर आउँछ। तर प्रोस्पोरिटोनको कार्यको कारण यो हुँदैन। तसर्थ, यो सबै छैन कि त्यो सहज गर्भपात गर्भवती समयमा गुलाबी डिस्चार्ज पछि थियो।
प्राय: प्राय: केहि घण्टा मात्र रहन्छ, र त्यसपछि पूर्ण रूपमा रोकियो, वा यो सेतोमा आउँछ। यस मामिलामा गर्भावस्था भंग गर्न कुनै खतरा छैन, तर तपाईंले डाक्टर राख्नु पर्छ। स्त्री रोग विशेषज्ञले हार्मिनेसको विश्लेषणको एक विश्लेषण नियुक्त गर्दछ, र यदि प्रोस्पोस्टोनको स्तर महत्वपूर्ण छ भने, यसले गर्भवती औषधि छान्छ जुन गर्भवती उत्पादन गर्दछ।
तथापि, कहिलेकाँहि गुलाबी विनियोजनहरू जुन प्रारम्भिक समयमा देखा पर्दछ प्लेन्सेसा प्रतिस्थापनलाई संकेत गर्न सक्दछ। यी केसहरूमा, प्रत्येक घण्टा विनियोजनहरूको प्रशस्त हुन्छ, र रगत तिनीहरूमा अवरोध हुन्छ। याद राख्नुहोस्, गर्भावस्थामा रगतको लागि डिस्चार्जसँग डिस्चार्जले चिकित्सा सेवाको आवश्यकतालाई संकेत गर्दछ। के तपाईं आफैंलाई महसुस गर्नुहुन्छ? एक एम्बुलेन्स कल गर्नुहोस्! बच्चा गुमाउनु भन्दा "झूटो चुनौती" को लागी तिर्नु राम्रो हुन्छ!
गर्भावस्थाको दोस्रो आधामा पेन चिन्ह विनियोजन?
- गर्भवती महिलामा खराब घटनाहरू। र त्यस्ता लक्षणहरूको साथ 800% महिलाहरू पूर्ण रूपमा उनीहरूको आश्चर्यकर्म चल्छन्।
गर्भावस्थाको समयमा महिलाहरू छन्: खुट्टा चन्द्रमाको धेरै हुन्छ, द्रुत थकान, प्राय: विषाक्तसिस। यस अवधिको अर्को लगातार सुविधा रंगको कामको उद्भव हो, विशेष गरी यो प्रारम्भिक मृत मृतहरूमा हुन्छ।
गर्भावस्था भनेको एक शर्त हो जुन महिलाको शरीरमा धेरै प्राकृतिक प्रक्रियाहरूको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दछ। प्रायः यो घटनाले असंगतवादी लक्षणहरूको उपस्थितिमा पुर्यायो। यी मध्ये एक गर्भावस्थाको समयमा गुलाबी डिस्चार्ज हो। तिनीहरूले दुबै व्यक्तित्व र भ्रूणको सामान्य विकासलाई संकेत गर्न सक्छन्। तल झर्छ कि कसरी तिनीहरू पहिलो र तेस्रो त्रैमासिकमा साथ साथै, जसमा "अलार्मलाई कुट्नुपर्दछ, र तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा के गर्न सक्नुहुन्छ।
<< p> यस शीर्षकमा, फोरममा सम्पूर्ण छलफलहरू तैनाती गरिन्छ। तल सबैभन्दा सामान्य अनुरोधहरूलाई उत्तर दिन प्रयास गर्दछ।
मा गुलाबी स्रावको उपस्थितिको उपस्थितिको उपस्थितिको उपस्थितिको कारण:
गोप्य को नाम को नाम को नाम को नाम रक्तत्र CATACK को उपस्थिति को बारे मा कुरा गर्दछ। तिनीहरूको प्रत्यक्ष रकम मूल रंगलाई असर गर्दछ। यस्तो डिस्चार्जको उपस्थितिको लागि केही कारणहरू छन्। तर प्राय जसो हर्मोनल पुनर्संरचना हो। यसको पृष्ठभूमिमा संवेदनशील जननेन्द्रियहरू र श्वेत झिल्ली बढ्छ। यस सम्बन्धमा, योनी भित्र कुनै पनि सम्पर्क कार्यहरू माइक्रोट्रेममा नेतृत्व गर्न सक्षम छन्।
प्राय: गुलाबी बलगमको उपस्थिति अध्यक्षमा निरीक्षणको साथ सम्बन्धित छ। थप रूपमा, कारणहरूमध्ये केही जिनिकालोजिकल रोगहरू भनिन्छ। त्यसोभए, आवधिक रूपमा रक्तस्राव (विशेष गरी यौन सम्बन्धको पछि) Cervix को क्षरण प्राय: बलगमको एक विशिष्ट छायाको कारण।
<< p> महिलाको शरीरमा गर्भावस्थामा विभिन्न अवधिहरूमा, विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्, जुन एक निश्चित तरीकाले यौन गोप्यलाई असर गर्दछ। यो कारण पत्ता लगाउन यो सत्य हो कि डाक्टर मात्र एक डाक्टर मात्र गर्न सकिन्छ एक योनी निरीक्षण, परीक्षण र एक अल्ट्रासाउन्ड। यदि, थप रूपमा, थप लक्षणहरू अवलोकन गरिन्छ (SPASMS, जलिरहेको, सूजन, आदि), त्यसपछि एम्बुलेसिन्स वा यसको स्त्रीशास्त्रीमा सम्पर्क गर्न आवश्यक छ।
गर्भावस्थामा खतरनाक pink plactions हो?
Phale-pink डिस्चार्ज गर्भावस्थामा। प्राय: महिलाहरुलाई रोगविज्ञानको रूपमा लिइन्छ। अवश्य पनि, तुरुन्तै, यदि डाक्टर विपरितमा आउन सक्षम हुनेछैन। यसको लागि पूर्ण रूपमा गरिएको परीक्षा आवश्यक पर्दछ। तथ्या .्कका अनुसार, प्राय जसो प्राकृतिक घटनाहरूको परिणाम हो (यदि बलगम प्रकाश हो र कुनै अन्य लक्षणहरू होइन भने)।
सेक्स बिचमा रगतको ठूलो मात्रा स्थायी आमा हुनु पर्छ। तत्काल मद्दतको आवश्यकता खोज्नुहोस् यदि यसको संख्या बढेको छ भने, र color गाढा भएको छ। गहन मदिराहरू गर्भपात वा गम्भीर रोगीय प्रक्रियाको धम्कीको स्पष्ट संकेत हो। यदि तपाईं समय मा मद्दत खोज्नुभयो भने, तपाईं बच्चा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
स्थिति पनि खतरनाक छ जब बलगमले खैरो र color ्ग वा खैरो क्लोजीहरू प्राप्त गरेको छ। यसको मतलब यो हो कि त्यहाँ केहि प्रकारको चोटपटक वा हेमटोमा थियो, र अब शरीरले रोलमा रगतबाट छुटकारा पाउन खोज्दै छ। यस्तो अवस्थामा, अस्पतालमा व्यक्तिगत व्यवहार तोकिएको छ। यसले हार्मोनल तयारीको एक पाठ्यक्रम र भिटामिनहरूको संरक्षणमा मद्दत समावेश गर्दछ। प्रासंगिक थेरापी पूर्ण सर्वेक्षणको आधारमा चयन गरिएको छ।
P2> PINTISISS विनियोजनहरू विभिन्न गर्भावस्था अवधिमा
एक घटना गरीयो डिस्चार्ज प्राय: भविष्यको आमाको बारेमा चिन्तित हुन्छ। रंग, स्थिरता, खण्ड परिवर्तन गर्नुहोस्, खण्ड एक गर्भवती महिला चेतावनी दिनु पर्छ। हामी गर्भावस्थाको क्रममा गुलाबी डिस्चार्जलाई विचार गरौं, उनीहरूको उपस्थितिको मुख्य कारणहरू पनि दिनुहोस् र त्यस्ता लक्षणहरूले के भन्ने बारे विस्तृत वर्णन गर्नुहोस्।
प्रकाश-गुलाबी विनियोजन केको समयमा के हुन्छ? यो याद गर्न लायक छ कि ईस्टेसन प्रक्रियाको सुरूमा त्यस्तै घटनाहरू प्राय: उल्लेख गरिएको छ। तथ्या .्कका अनुसार, करीव -0-400% सबै महिलालाई यस्तै सामना गरिन्छन्।
धेरै जसो केसहरूमा, चयनको गुलाबी छाया भनेको गर्भधारण पछि श्रद्धांजली क्षेत्रको नतिजा हो। त्यसोभए, यौन पछि धेरै महिलाहरू स्त्रीको अध्यक्षमा डाक्टरलाई जाँच्न सक्छन्। यो यस अवस्थामा चिन्ता लायक छैन, त्यसैले। यस्तो डिस्चार्ज कम तीव्रता छ, भोल्यूम तिनीहरू शाब्दिक रूपमा हराउँदछन्।
<< p> यो ध्यान दिन लायकको पनि हो कि कम शब्दहरूमा त्यस्ता लक्षणहरू अझै पनि परिवर्तनकर्ता पृष्ठभूमिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, यो मनमा राख्नु पर्छ कि भ्रूस पर्खाल को व्यापक को समयमा, गर्भाशय पर्खाल को अखण्डता देखा पर्यो, साना रक्त वाहिका जहाजहरु लाई भंग गर्दै। यो रगत हो जसले स्रावको रंग दिन्छ।
दोस्रो त्रैमासिकमा गर्भावस्थामा अर्को के डिस्चार्ज गर्न सक्दछ? गन्तव्य प्रक्रियाको बीचमा त्यस्तो लक्षणहरूले उल्लंघन, गर्भावस्था जटिलताहरूको उपस्थितिलाई जनाउँछ। प्राय: गुलाबी सिलहरू ग्रीवाको क्षयमा देखा पर्दछ। यो रोग गर्भावस्थामा उपचार गरिएको छैन। यद्यपि डाक्टरले आवधिक रूपमा एक स्त्रीशास्त्रीय परीक्षा सञ्चालन गर्दछ, क्षतिको भोल्युमलाई आकलन गर्न, नयाँ घावको अपवाद।
यो याद गर्नु लायक छ कि यो केसमा, प्राय जसो गर्भावस्थामा, गुलाबी हाइलाइटहरू सेक्स पछि सीधा नोट गरिएको छ। Cervix म्यूसालाई रोक्नुहोस्, ईन्टरकटको समयमा गर्भाशयको स्वर बढाउँदछ। यस रोगको साथ, डाक्टरहरूले यौन बन्धनबाट टाढा रहन सल्लाह दिन्छन्।
2 त्रैमासिकमा गुलाबी स्रावको खतरनाक कारणहरू मध्ये एक खतरनाक कारणहरू मध्ये एक प्लेसेन्टाको उल्लंघन हुन सक्छ। यदि चयन खैरो छाया देखिन्छ, तिनीहरूको भोल्यूम बढ्छ, घोरता देखा पर्दछ, यो बारेमा डाक्टरलाई सूचित गर्न आवश्यक छ।
<< p> गर्भावस्थाको समयमा तेस्रो त्रैमासिकमा गुलाबी डिस्चार्ज के हो? गर्भधारणको अवधिमा प्राय जसो समान लक्षणहरूले फल-भिन्न सर्युलाटल प्रणालीको अवरोधलाई जनाउँदछन्। तसर्थ, पूर्ण जाँच सधैं आवश्यक हुन्छ।
बच्चाको नर्सरीको बखत, भावी आमाको शरीर सब भन्दा फरक घटनाहरूको अधीनमा छ।
अक्सर चयनको सामान्य जीवनको लागि अक्सर अपश्चवादी हुन्छ र ऐनामा डराउँछ, तर प्रायजसो शरीर शरीरमा धेरै प्राकृतिक प्रक्रियाहरूको परिणाम हुन्छ।
तिनीहरूसँग ध्यानपूर्वक सम्बन्धित छ र, यो वांछनीय छ, यो सँधैको बारेमा सँधै रिपोर्ट गर्न को लागी रिपोर्ट गर्न।
धेरै राम्रा फ्लोर प्रतिनिधिहरू प्रारम्भिक गर्भावस्थाको बखत गुंडा डिस्चार्जहरू डराउँछन्, जब गर्भपात हुन्छ, र कुनै पनि, दैनिक रगतको सबैभन्दा सानो थोपा खतराको रूपमा लिइएको छ।
कहिले पहिलो त्रैमासिकमा साइन इन गरिएको पहिलो त्रैमासिकमा सन्दर्भ हो?
समान छायाले रगतका टुक्राहरूको बोल्दछ। परिणामस्वरूप छाया (हल्का गुलाबी, गाढा गुलाबी, रक्तपात, आदि) यसको मात्रामा निर्भर गर्दछ। त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जुन यस घटनालाई पु .्यायो। सबैले आमा र भ्रूणको लागि वास्तविक खतरा पाएनन्। सबैभन्दा सामान्यमा निम्न मध्ये एक कल गर्न सकिन्छ:
<< p> प्रारम्भिकमा र पछि शरीरमा नेभिगेसन अवधिमा बिभिन्न प्रक्रियाहरू अवलोकन गरिन्छ, जसले अपरिक्षवादी रंगको रहस्यको रहस्यको आगमनलाई असर गर्न सक्छ।
प्राय: आउँदै गरेको नामांकन हो। यस बिन्दुमा रंगको केही थोपाहरू यस बिन्दुमा आदर्श हुन्। यो एक भाँचिएको fromforly को परिणामको रूपमा देखा पर्दछ, जसमा सानो रक्त वाहिकाहरू हुन्छन्। तिनीहरूको क्षति बेवकूफ देखिएको कारण रक्तस्रावको कारण हुन्छ। एरिथ्रोसाइट्स रेड को एक गोप्यता को एक गोप्य कुरा वितरण। यस्तै प्रक्रियामा महिलाको शरीरको तत्परताको बारेमा गर्भधारणको बारेमा मात्र बोल्छ।